Mareykanka oo dowladda Farmaajo ku amray in ay waqtigeeda ku qabato doorashada madaxtinimo.
Wasiirro katirsan Dowladda oo isku dhax feeray Xafiiska R/wasaaraha.
Wednesday June 24, 2020 - 12:18:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad qoob gariir ah ayaa markale usoo gashay malaayiin qof American ah kadib markii uu cudurka Carona Virus uu si xowlli ah wadankaas ugu faafay.
Dowladaha qaaradda Yurub ayaa iyana qorshaynaya in ay xayiraad kusoo rogaan dadka American-ka ah ee doonaya in ay dalalkooda usoo safraan arrinkaas oo saameyn dhaqaale ku reebi doonta Mareykanka.
Wargeyska New York Times ayaa sheegaya in Midowga Yurub uu muwaadiniinta amerikaanka ah ka mamnuuci doono in ay galaan wadamada qaaradda sababa laxiriira donald Trump oo ku fashilmay xakameynta caabudqa Covid19.
Dad ka badan 123 kun oo ruux ayaa gudaha dalka Mareykanka ugu dhintay Carona Virus halka uu soo ritay dad gaaraya 2.39 milyan, dalka Baraaziil oo ah dalka Labaad ee Carona ladhiban ayay dhimashadu gaartay 52 kun oo ruux.
Khabiir ku takhasusay cudurrada faafa madaxna ka ah machadka caafimaadka mareykanka ayaa sheegay in xilligada jiilaalka iyo dayrta ee soo socda gudaha Mareykanka uu ka bilaaban doono mowjadaha labaad ee faafitaanka Carona Virus wuxuuna ka digay in halistu noqon doonto mid daran haddii aan si degdeg ah loo helin daawo lagu joojiyo cudurkan.
dhanka qaaradda Yurub oo horraantii bishaan June dib loo furay inta badan xuduudadaha dalalka iyo isku socodka dadweynaha ayaa markale looga dhawaaqay xaalad feejignaan ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowlada Jarmalka ayaa lagu sheegay in xaaladii karaantiilka aheyd dib loogu celiyay gobollada dhaca waqooyiga wadanka kadib markii shalay oo kaliya ladiiwaan geliyay 1500 oo bukaanno ah.
Wasaarada arrimaha gudaha Jarmalka ayaa sheegtay in karaantiilka iyo bandawgu uu saameeyay dad gaaraya 600 oo kun kuwaas oo kunool wilaayada raayan, dalka Talyaaniga maamulayaasha wadankaas ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in cudurku laba kacleeyo sababa laxiriira dadka oo buux dhaafiyay suuqyada iyo goobaha shaqada.
Caabuqa Carona Virus oo asiibay Bisad.
Donald Trump oo sheegay in Cudurka Carona uu halaag hor leh ka geysan doono Mareykanka.
Malaayiin qof American ah oo ladhiban Caabuqa Carona Virus.